Akanjo misy akanjo |
Seamless SX - Fehin-tànana mihetsiketsika amin'ny fehin-kibo vita amin'ny XXXXL
Ny tsara indrindra amin'ny mpanao ady totohondry sy ho an'ny lehilahy izao no tena ahazoana aina indrindra, amin'ny landy malefaka malefaka. Fruit Of The Loom Tag-Free Boxer Briefs dia manana fehin-kibo fampiononana tsy misy marika, tongotra tsy solafaka, ary lalitra manana endrika fanohanana fanampiny. Ny famonoana IntelliFresh dia manakana ny bakteria sy ny hamandoana hijanona ho vaovao mandritra ny andro.
Karazan'akanjo lava-bolo vita amin'ny volon-dehilahy marevaka
Ny varahina dia nanisy lamba viscose ho an'ny crotch hitazomana ny lamba antimicrobial sy anti-fofona. Voninkazo mavo ary maina haingana vatan-kazo maoderina misy fehin-kibo manify nopetahany sary mihetsika miaraka amin'ny sary famantarana marika Mamelombelona anao amin'ny ririnina sy mangatsiaka kokoa amin'ny fahavaratra. .
Akanjo marobe malefaka marevaka tsy misy fangarony malefaka marevaka
Pull On fanidiana
Tag maimaim-poana ho an'ny fampiononana tontolo andro
Fandraisana an-tsary feno, fohy fohy
Valahana tsy voafatotra
Kitiho ny baravaran'ny tongotra malalaka
Akanjo malefaka malefaka ara-tontolo iainana mamono Spandex mirindra atin'akanjo malefaka
Ny dian-kapoka mifanohitra amin'ny fehin-kibo vita amin'ny elastika dia mitondra fampisongadinana an-kolaka amin'ireo takelaka boxer vita amin'ny landihazo mahazatra misy sidina mitsangana mitsangana
Fehikibo misy elastika, tsy asiana marika raha tiana hampiononana
Nihatsara kokoa isan'andro: mihaino ny hevitry ny mpanjifa izahay ary mandamina tsara ny antsipiriany rehetra mba hiantohana ny kalitao, ny fahamendrehana ary ny fiononana
Ny maodely dia 6'2 ″ ary manao habe Medium
Breathable malefaka avo elasticity atin'akanjo Mens boxer
Milina manasa mangatsiaka. Ampiasao fotsiny ny «chiffre» tsy «chlore» raha ilaina. Aza mampiasa lamba malefaka. Mianjera ambany ambany. Aza pasohina
Kitapo miloko isan-karazany ity. Ity fonosana ity dia mety misy ny solida rehetra, ny pirinty rehetra na ny fitambarana.
Mesh azo velomina, lalitra miendrika fanampiana manohana ny rivotra izay ilainao
Voasedra ny mpanjifa, namboarina manokana
Tsy mitaingina ny tongotra ary tsy afaka mifintina na mamatotra ny tadin-tànana voaroaka malalaka
Anti Bacterial Plus Size Waist Band Elastic Daily Mens Briefs
Lamba malefaka somary malefaka, mifoka rivotra sy maivana kokoa noho ny atin'akanjo landihazo
3D U-POUCH HO AN'NY LOHATENY ULTRA: ny endrika Ultra U-paosy dia nanampy tamin'ny pataloha ambanin'ady mba hanomezana toerana bebe kokoa ho an'ny faritra manokana an'ny olona tsy misy fantsom-panafody na teritery. Manampy anao hatoky tena sy hanao firaisana amin'ny paosinao izany
Ny fijanonana matanjaka sy malefaka dia asio fehikibo miaraka amina sary famantarana mahazatra izay tsara hampihenana ny fanentanana ny hoditrao
Custom Colour Anti Static Soft Cotton Breathable Gay Men Underwear
Fohy amin'ny ady totohondry entin'ny fanatanjahan-tena ho an'ny lehilahy miaraka amin'ny lamba Cool Dri izay manala ny hamandoana hiala ny hoditra hitazomana ho maina sy maina; Aza adino foana ny milanja maimaim-poana amin'ny fampiononana mangidihidy amin'ny lalitra nentim-paharazana.
Akanjo fohy vita amin'ny landihazo haingam-pandeha haingam-pandeha
Fehin-tsarimihetsika Mesh Boxer: 90% polyester 10% spandex, iray amin'ireo atin'akanjo mafana malaindaina sy haingana indrindra.
Tombontsoa lamba:Ny atin'akanjo lamba manafosafo sy hamandoana dia mitazona anao ho maina sy hangatsiaka tontolo andro. Ny atin'akanjo Poudew ho an'ny lehilahy dia tonga lafatra ho an'ny trano, fanazaran-tena, fitsangatsanganana ary fanatanjahantena.
Akanjo malefaka maivana vita amin'ny akanjo lava vita amin'ny elastika vita amin'ny elastika
Mahagaga miaina sy maivana miaraka amin'ny volo mando no mitazona ny vatanao ho maina sy hangatsiaka tontolo andro.
Noho io tombony azo amin'ny harato io, ny baotin-totohondry eto amintsika dia iray amin'ireo atin'akanjo lava miaina.
Mijanona ao am-balahana, afaka miaina, fohy ny baoritra fohy vita amin'ny lamba maina mamela anao hahazo aina kokoa rehefa mihetsika.
Tsy misy manjaitra na manjaitra zaitra manome anao malefaka.
Tapaho tanteraka ny paosy ary miakatra bebe kokoa ho an'ny efitrano bebe kokoa.
Gusset mihetsiketsika mihamitombo hahazoana fampiononana bebe kokoa.
Open Crotch Anti-Bacterial Breathable Cotton Mens atin'akanjo ady totohondry
atin'akanjo marobe ho an'ny lehilahy avy amin'ny Fruit Of The Loom izay manolotra fampiononana tsy misy marika, tontolo andro ary lalitra miendrika mpanohana; Akanjo lava-behivavy, atin'akanjo lava mifoka rivotra dia manana fiarovan-tena miaro roa; Ny lozisialy IntelliFresh an'ny lehilahy miakanjo atin'akanjo dia misoroka bakteria miteraka fofona ary manome fiarovana fofona maharitra